Eyona inlay yokuthontsiza yangaphakathi yokunkcenkceshela tape Umenzi kunye neFactory |DAYU
Indawo yemvelaphi: eTianjin, eTshayina
Inombolo yomthetho: ID161810RN
Ukutyeba (mm): 0.16 0.18 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0mm
Isithuba seDripper (mm): 100 150 200 250 300 400 500mm
Ukuhamba kweDripper[0.50] izinga (L/h):1.38L/h 2L/h 3L/h
Uhluzo: 120 mesh 120
Ifanelekile: Isetyenziselwa ukuhlwayela kwizityalo ze-strip, i-greenhouse yanamhlanje, imithi yeziqhamo, kunye ne-windbreak.
Iphakheji: (800-2000m / roll)
Ubude boqengqeleka: 1000/roll, 2000m/roll, 2500m/roll, 3000m/roll okanye wenze ngokwezifiso
IMathiriyeli ekrwada: PE
Iteyiphu yohlobo lwedriphu efakiweyo
Isizukulwana esitsha seemveliso zokunkcenkceshela ziphuhliswa ukusuka kwibhanti yokunkcenkceshela ye-cylindrical yangaphakathi.Yimveliso yokongayo yokunkcenkceshela ekwaziyo ukuhlangabezana neemfuno zolimo oluchanekileyo kunye nophuhliso lweSDI.
Ubunzima bodonga: 0.18 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2mm, njl.
Isithuba se-dripper: 100 150 200 300 400 500mm, njl.
Umlinganiselo wokuhamba: 0.8L/H 1L/H 1.2L/H 1.38L/H 1.8L/H 2L/H 2.4L/H 3L/H 3.2L/H
Iimfuno zokucoca: I-120 mesh 120 mesh filtration
Umda wesicelo: ilungele izityalo zokwembiwa, iindawo zokugcina izityalo zale mihla, imithi yeziqhamo kunye namahlathi omoya
Imbuyekezo ephezulu kutyalo-mali: Eyona ntsalela ilungileyo yokusebenza konkcenkceshelo kunye nohlahlo lwabiwo-mali, ngaphandle kokukhathazeka malunga nokuzinza kwemveliso kunye nokufana kokukhula kwesityalo.
Ukuqukuqela okufanayo: Idropha yembuyekezo yoxinzelelo ibonelela ngobungakanani obuchanekileyo bamanzi kunye nesondlo kwisityalo ngasinye ekuthuthweni kombhobho omde kunye nomhlaba ophezulu kunye nophantsi oguquguqukayo.
Ukunganyangeki kakuhle kokuthintelwa: Indlela eqhubekayo yokuzicoca ikhupha ubumdaka kwaye ayisayi kuvala ngexesha lomjikelo wobomi bezityalo.
Ukubekwa kwemibhobho yesebe ixesha elide, kwaye ixabiso liyancitshiswa: usebenzisa imibhobho engundoqo encinci, inokunkcenkceshela imibhobho yesebe ukuya kwiimitha ezingama-500 ubude, ukunciphisa iindleko zokufakela.
I-Agricultural Drip irrigation pipe/iinkqubo zeteyiphu zokunkcenkceshela ezikumgangatho ophezulu kunye nexabiso elikhuphisanayo
Iimpawu zombhobho wokunkcenkceshela :
1. I-dripper ejikelezayo iveliswa kuqala ngokuchaneka okuphezulu, emva koko ibambelele kwi-PE hose.
2. I-dripper edityaniswe ngokuthe ngqo ngaphakathi kumbhobho inokulahlekelwa koxinzelelo oluncinci kwaye
3. Ipropathi elungileyo yokuthintela ibhloko, umjelo wokuqukuqela ogudileyo kunye nokuhanjiswa kwamanzi.
4. Zimbini iindidi zeedriphu: imbuyekezo yoxinzelelo kunye ne-nonpressure-
imbuyekezo, ilungele iindawo ezahlukeneyo.
5. Idayamitha eyahlukileyo, ubukhulu bodonga kunye nesithuba se-dripper sinokuveliswa.
6. Olona phawu lubalulekileyo kukuba lunokusetyenziswa kwiminyaka emi-5-8.
Yomelele kwaye isetyenziswa ngokubanzi kwindawo evulekileyo yokunkcenkceshela.
Ngaphambili: I-OEM Supply Water Irrigation yokunkcenkceshela iNkqubo yokunkcenkceshela-iSebe lezoLimo lokunkcenkceshela iPVC elithambileyo iLayflat Water Hose – DAYU
Okulandelayo: Inkqubo yolawulo oluzenzekelayo ngokupheleleyo
Iphiko elinye labyrinth drip tape yokunkcenkceshela
tape yokunkcenkceshela ithontsi
inlay drip yangaphakathi umbhobho wokunkcenkceshela (umngxuma kabini)
Iteyiphu yokuthontsiza ehlawulelwe ngoxinzelelo